Mb Terezy kely – Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA
Tag: Mb Terezy kely
AFAFI, Amin’izao fankalazana ny fetin’i Mb Terezin’i Jesoa Zazakely izao dia mikarakara fifaninanana « Makà tahaka ahy » ao amin’ny Pejy Facebook AFAFI-FET Madagasikara APMEJ Madagascar ny Foibe Nasionalin’ny AFAFI – FET. Toy izao àry ny mombamomba izany Lohahevitra: “Makà tahaka ahy toy ny akako tahaka an’i Kristy” 1 Korintiana 11, 1 Izany hoe maka tahaka …
Mb Terezy kely
Fandaharam-potoana mandritra ny fandalovan’i Mb Terezy kely
Nihemotra anio zoma 3 jolay ny fahatongavan’i Mb Terezy kely. Ivavahana mba tsy hiova be loatra ny fandaharam-potoana efa nomanina. Hitsidika ireo diosezy 21 izy, miaraka amin’ireo ray aman-dreniny. Anisany hanamarika ny JMJ Mada 8 ihany koa ny fandalovany any Fianarantsoa. Alamino ny fotoana ary araho tsy tapaka ny vaovao. Fanararaotra ny fotoana toa izao …